Momba anay - Beijing LaserTell Medical Co., Ltd.
LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. dia mpisava lalana amin'ny fampidirana loharano eo amin'ny sehatry ny fitsaboana estetika ara-teknolojia Lasers.
Androany, LaserTell Technologies (UK) Co., Ltd. no mpanavao ny fanohanana ara-teknika, serivisy aorian'ny fivarotana, ny fiofanana amin'ny klinika, ny marketing, ary ny fakan-kevitra amin'ny tsenan'ny fandidiana sy ny hatsarana avo lenta.
Miorina amin'ny 46 taona ny fahalalana ara-teknika sy ny fikarohana ara-barotra (20-taona-asa orinasa fitsaboana, 8-taona-teknolojia, 7-taona-barotra, 6-taona famolavolana, 5-taona-fanompoana), nahasarika haavon'ny matihanina avy amin'ny injenieran'ny fitaovana, mekanika, elektronika, famitana farany, fitsaboana ara-pahasalamana ary marketing, ary nanangana ny orinasan-tserasera Beijing LaserTell Medical Co., Ltd. tamin'ny taona 2010.
Nandritra ny taona maro, natambatra ny haavon'ny fanavaozana, ny fahaizana ary ny fahazoan'ny mpanjifa ambony noho ny an'ny orinasa rehetra amin'ny orinasanay.
Ankehitriny ny Beijing LaserTell no marika No.1 any Shina ary izy no voalohany namorona lasantsy fanesorana volo feno eny an-tsaha, toy ny 755 + 808 + 1064nm Diode Laser, CO2 Laser Fractional, SHR, E-light (IPL + RF), Laser 755nm Alexandrite, Nd: YAG Laser, sns.
Miaraka isika, mandray andraikitra kokoa amin'ny tsena noho ny teo aloha. Izahay dia mamela ny mpitsabo hanolotra fitsaboana mahomby sy mahomby ary mahasoa amin'ny marariny, na dia mamela ny marary hisitraka ny fahaizan'ireo haitao sy teknolojia voaporofo amin'ny klinika aza izahay.
OEM: mpanamboatra fitaovana tany am-boalohany; ODM: serivisy (Orinasa mpamorona endrika).
Beijing LaserTell Medical Co., Ltd. dia mitady hevitra vokatra vaovao foana.
Raha mitady fikambanana matihanina sy za-draharaha ianao hiara-hiasa dia mety afaka manampy izahay.
Ny fahaizantsika manarona ny seho feno ny hatsaran-tarehy sy ny hatsaran-tarehin'ny laser ary ny vokatra ara-pitsaboana, avy amin'ny foto-kevitra voalohany hatrany amin'ny serivisy aorian'ny tsena.
Malemy paika sy mahay mandanjalanja ary za-draharaha izahay.
Raha manana hevitra momba ny vokatra vaovao ianao dia avelao ny ekipa Beijing LaserTell an'ny teknisianina za-draharaha sy matihanina hanampy anao amin'ny fananganana azy amin'ny fiainana.
Manohana anao izahay amin'ny fiatrehana ireo fanontaniana mifandraika amin'ny famokarana sy ny teknolojia.
Miaraka amin'i Beijing LaserTell dia hahazo ianao:
A. Fotoana haingana kokoa hamarotana
B. Fampiasam-bola ara-bola
C. Vahaolana teknika vaovao
D. Fampandrosoana sy famokarana fiaraha-miasa
1. Fanitsiana ny lozisialy (famolavolana logo & menio, fiteny samihafa)
2. Famoronana endrika milina tsy manam-paharoa
3. Fitsaboana fitsaboana, famolavolana sivana.
5. Araka ny teti-bola, ny lanjan'ny milina, ny habeny dia manome tetikasa mety.
Ny OEM sy ODM mandrakotra:
Azontsika atao ny manao ny serivisy OEM sy ODM ho anao amin'ireo masinin'ireto manaraka ireto:
1. Teknolojia hazavana mahery vaika
2. Teknolojia E-hazavana (IPL + RF)
3. Q-switch ND: teknolojia laser an'ny YAG
4. Teknolojia mikraoba-dermabrasion
5. Teknolojia cavitation ultrasonic
6. Teknolojia laser miato (ER: Laser laser, laser laser)
7. Teknolojia fanesorana volo laser (ND pulsed lava: Laser YAG, laser Diode)
Vokatra asongadina, Sitemap, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, Laser Epilator Ipl, Diode fanesorana volo laser amin'ny trano, 3 amin'ny 1 Ipl, Jiro Flash Ipl Xenon, Laser Module 808, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina